Amparibe – Fokontany mpangorona amboara - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Amparibe – Fokontany mpangorona amboara
Randriamantena Jonhson sy ireo amboara efa azon'ny fokontany.
Na kitra, na basket, na hay ady toy ny Wu Shu, Tae Kwon Do, Karate, na tsipy kanetibe : saika ahoron’ny fokontany Amparibe ny amboara hiadiana isan-taona. Nifanintsana teo amin’ny basket, tao amin’ny Sainte Famille ny ekipa avy amin’ny boriborintany enina tamin’ny taona 2012 teo : lasan’Amparibe ny amboara. Nisy koa ny toy izany teo amin’ny kitra : mbola lasany ny amboara. « Teo amin’ny Wu Shu, 12 mianadahy no nalahatray : nibata medaly sy amboara ny 10 izahay. Tompondakan’i Madagasikara Rakotomalala Navalomanjaka, teo amin’ny sokajy latsaky ny 70kg. Ramamonjisoa Justin kosa teo amin’ny sokajy latsaky ny 65kg. Zaza vao 13 taona, avy eto aminay no tompon-dakan’i Madagasikara eo amin’ny Kata », hoy Randriamantena Jonhson, filoha lefitry ny fokontany sy mpitarika tanora ara-panatanjahantena efa hatramin’ ny ela.
«Ny hetahetanay, rehefa fifaninanana amin’ny faritra,dia tokony tsy hampandoavina vola ny klioba, rafitra efa mangozohozo, zara raha misy vola hiodinany. Fototra misy ireny klioba ireny ny fokontany ary ireny no hany hahazoana mitaiza tanora koa tokony hampiana», hoy kosa Andrianasolo Tiana, filohan’ny fokontany ao Amparibe-Ambohidahy-Avaratr’i Mahamasina.
Mpanoratra Rijakely, 11.01.2013, 18:49	FIARAHAMONINA